igama yomhlaba wonke hepatoprotective ejenti owaziwa - «Phospholipides» (noma phospholipids), futhi igama elisemthethweni, ethandwa ngamaketanga okudayisa - "Essentiale Fort H". Nokho, it is edume kubhekiselwa kuye ngokuthi izidakamizwa "Essentiale Forte". Izibuyekezo ngalokhu izidakamizwa ngokuyinhloko omuhle, nokuthi kuye kwavula udumo nokuduma. Nokho, asikho isidingo ukuthatha izidakamizwa oluqinile noma kunini uma isibindi ogulayo. Lesi sidakamizwa has injongo ecacile futhi Inkambo yokwelashwa kufanele njalo udokotela. Naphezu kweqiniso lokuthi umkhiqizo iqukethe eziningi amavithamini, ngeke kubhekwe njengento ithuluzi zokuvimbela futhi impilo wokwakha. Futhi ngisho noma yokusetshenziswa wabonisa ukuthi lesi sidakamizwa "Essentiale Forte" - yilokhu okudingayo esimweni sakho, inkambo ngamunye ukwelashwa kufanele liqoke uchwepheshe emva ukuxilongwa okujuli-.
Umuthi itholakala amafomu Isikali ezimbili: Amaphilisi futhi njengoba isixazululo umjovo. Kunezindlela eziningana izifo lapho ebekiwe okufikela kuyo izivakashi "Essentiale Forte". Izibuyekezo zabantu egade barhola umbukiso izidakamizwa ukuthi ngempumelelo kusiza kwesibindi esinobuthi oludakayo, acute kanye ne-hepatitis okungamahlalakhona, okunamafutha isibindi, okuyinto zasezindaweni ezihlukahlukene (kuhlanganise ngenxa sikashukela), isibindi sibe sesomile, preeclampsia, ikhoma hepatic nezinye izifo kwesibindi ne evamile ukusebenza izifo ukuphathwa kwabathintwayo. Futhi ngalokwentekako zomuthi "Essentiale Forte" impendulo abasebenzisi ukusinika ukwaziswa okuthakazelisayo kakhulu ukuthi kuyasiza ukuba sibhekane ngokuphumelelayo kungasho lutho ngempela "isibindi" isifo efana psoriasis, izidakamizwa ukudakwa nokugula ngemisebe. Nokho, qaphela ukuthi imiphumela emihle kakhulu, imithi kuphela lihambisana nezinye izidakamizwa.
Iyini imfihlo ye ukusebenza okugcwele anjalo esikhathini ekwelapheni izifo ezihlukahlukene izidakamizwa "Essentiale Fort H"? Izibuyekezo Ochwepheshe abonisa ukuthi phospholipids kubalulekile, okuyizinto ingxenye eyinhloko izidakamizwa, kulawula exchange of ushukela namafutha, asiza isibindi ukwenza umsebenzi walo, zivimbela kumiswa ezicutshini e umzimba futhi kubangele ekubuyiselweni hepatocytes. Futhi, odokotela walidumisa belungiselela yokuthi kukhona cishe awekho Izimo ngokusetshenziswa kwayo. Ngeke nje ukuthatha izinsana wobuhlengikazi abantu ababonisa hypersensitivity emuthini. Isenzo lesi sidakamizwa "essentseale Forte" futhi zandisa abamelwe B yayo amavithamini (ikakhulukazi V1i B2, B6 futhi B12), PP kanye no-E, ezithinta kuqinisela umzimba jikelele.
Kepha-side effects, "Essentiale" abasebenzisa izidakamizwa Izibuyekezo ukusho okunjalo ezingavamile. Ngezinye izikhathi kukhona iDemo ikhefu ukugaya, gastralgia, ngezinye izikhathi ukucanuzela kwenhliziyo noma ukuhlanza, nokungezwani komzimba nezinto ezifana nesimungumungwane. Kodwa izidakamizwa is hhayi contraindicated phakathi nokukhulelwa kanye lactation.
Inkazimulo izidakamizwa "Essentiale Forte" (ikakhulukazi ngesimo amaphilisi) njengoba engenangozi Vitamin izidakamizwa izidakamizwa wenza kuthandeka kubantu. It sithathwa e izifo ezingathi sína kwababhemayo isibindi (isibonelo, ukusha kwesibindi kohlobo viral), kanye prophylaxis (balondoloze isibindi ngesikhathi ukusetshenziswa njalo utshwala noma esimweni izinkinga umzimba lipid). Lo muthi kufanele kuthathwe kanye psoriasis, kukhona ngisho yamakhono ukuphumelela izidakamizwa "Essentiale Forte" emzabalazweni ne-vitiligo - depigmentizirovannye izindawo usuku lokulungisela ehlelekile mnyama futhi "imisiwe". Kodwa ezimweni ezingajwayelekile, abasebenzisi babike ukulunywa, reddening kwesikhumba nokungezwani komzimba nezinto, ezabizwa e ukucanuzela kwenhliziyo noma ukuhlanza. The main inkinga yezidakamizwa "Essentiale Forte" Izibuyekezo wabhekisela inqwaba mbumbulu zomuthi emakethe.
Thatha capsule "Essentiale Forte" izikhathi eziningana ngosuku ukudla, amanzi okuphuza izinto eziningi ezincane. Umjovo iqondiswa ngemithambo yegazi (bolus, kodwa ukuvuza kangcono).
Aerosol "Avamys" - fanekiso ukuba "Mometasone" izimali Russian
Ukusabalala phezu 90% ukutheleleka kungenzeka kumiswe ngesikhumba isinqandakuvunda
Ikhambi for uhudo
Umdlavuza wegazi okunobuthi e amakati: izimpawu kanye nokwelashwa
Jamal emlonyeni wengane: indlela wean?
Kanjani ukuba ujuluke? amakhambi Usizo Folk